खोज पवित्र बाइबल - नेपाली बाइबल (NNRV) 2012
सटीक शब्द (केस संवेदनशील)
शब्द समावेश गर्दछ
२ शब्दहरू समावेश गर्दछ (अल्पविरामद्वारा विभाजित)
२ शब्दहरू मध्ये १ शब्द समावेश गर्दछ (अल्पविरामद्वारा विभाजित)
मिली ८१ ~ मत्ती, मार्क, लूका, जन, प्रेरित, रोमी, 1 Korinthierbrevet, २ कोरिन्थी, गलाती, एफिसी, फिलिप्पी, कलस्सी, १ थिस्सलोनिकी, २ थिस्सलोनिकी, १ तिमोथी, २ तिमोथी, तीतस, फिलेमोन, हिब्रू, जेम्स, १ पत्रुस, २ पत्रुस, १ यूहन्ना, २ यूहन्ना, ३ यूहन्ना, यहूदा, प्रकाश
तिनैको नाउँमा जाति-जातिहरूले आशा राख्‍नेछन्‌।”
यरूशलेममा शिमियोन नाउँ भएका एक जना मानिस थिए। उनी इस्राएलका सान्‍त्‍वनाको आशा गर्ने धर्मी र भक्तजन थिए, र पवित्र आत्‍मा उनीमाथि हुनुहुन्‍थ्‍यो।
यदि फिर्ता पाउने आशा राखेर कसैलाई ऋण दिन्‍छौ भने, तिमीहरूलाई के लाभ भयो र? किनकि फेरि उत्ति नै पाउने आशा राखेर पापीहरूले पापीहरूलाई ऋण दिन्‍छन्‌।
त्‍यसले आशा नगरेको दिन र नचिताएको घड़ीमा त्‍यसका मालिक आउनेछन्, र त्‍यसलाई दण्‍ड दिनेछन्, र त्‍यसको दशा अविश्‍वासीहरूको जस्‍तो हुनेछ।
अब येशूलाई देखेर हेरोद अत्‍यन्‍त खुसी भए। किनकि तिनले उहाँको विषयमा सुनेका हुनाले धेरै दिनदेखि उहाँलाई हेर्ने इच्‍छा गरेका थिए, र उहाँले केही आश्‍चर्य काम गर्नुभएको हेर्ने आशा गर्थे।
इस्राएलको उद्धार गर्ने उहाँ नै हुनुहुन्‍छ भन्‍ने हामीले चाहिँ आशा गरेका थियौं। यी सब कुरा छोड़ेर, यो घटना घटेको आज तेस्रो दिन हो।
“यो नसम्‍झ, कि म पिताको सामु तिमीहरूलाई दोष लाउनेछु। तिमीहरूलाई दोष लाउने त मोशा छन्, जसमा तिमीहरूले आफ्‍ना आशा राखेका छौ।
यसकारण मेरो हृदय आनन्‍दित र मेरो जिब्रो हर्षित भयो। यसबाहेक मेरो शरीरले पनि आशामा जिउनेछ।
तिनीहरूबाट केही पाउने आशा गरेर त्‍यसले ध्‍यान दिएर तिनीहरूलाई हेर्‍यो।
तर त्‍यसका मालिकहरूले तिनीहरूका कमाइका आशा विफल भएको देखेर पावल र सिलासलाई समातेर बजारको चोकमा शासकहरूकहाँ तान्‍दै लगे।
तिनीहरूले परमेश्‍वरलाई खोजून्, शायद तिनीहरूले छामछुम गरेर उहाँलाई भेट्टाउलान्‌ कि भन्‍ने आशामा यसो गरियो। तर पनि उहाँ हामी हरेकबाट टाढ़ा हुनुहुन्‍न।
तर त्‍यस महासभामा एक दल सदुकी र अर्को दल फरिसीहरू रहेछन्‌ भन्‍ने थाहा पाएर पावलले उच्‍च सोरमा भने, “भाइ हो, म त फरिसीहरूका छोरो फरिसी नै हुँ। मरेकाहरूको आशा र पुनरुत्‍थानको कारण मेरो मुद्दा चलिरहेछ।”
तर तपाईंले तिनीहरूको कुरा नमान्‍नुहोला, किनकि तिनीहरूमध्‍ये चालीसभन्‍दा पनि बढ़ी मानिसहरूले तिनको हत्‍या नगरुञ्‍जेल केही खानपान नगर्ने शपथ खाएर तिनलाई मार्नलाई ढुकेर बसेका छन्, र अब तिनीहरू तपाईंका वचनको आशा गरी तयारीमा छन्‌।”
धर्मी र अधर्मीहरू दुवैको मृतकबाट पुनरुत्‍थान हुन्‍छ भन्‍ने यिनीहरू आफैले स्‍वीकार गरेजस्‍तै म परमेश्‍वरमा आशा राख्‍दछु।
पावलबाट कतै रुपियाँ मिलिहाल्‍ला कि भनी उनले आशा पनि गरेका थिए। यसकारणले पनि उनले तिनलाई घरीघरी डाकी कुराकानी गर्ने गर्थे।
परमेश्‍वरले हाम्रा पुर्खाहरूलाई गर्नुभएको प्रतिज्ञामा मैले आशा राखेको कारणले आज म यस मुद्दामा खड़ा भएको छु।
हाम्रा बाह्रै कुलहरूले यो आशा प्राप्‍त गर्नलाई रातदिन एक चित्तले आराधना गर्दछन्, र यही आशाको निम्‍ति, हे राजा, यहूदीहरूले मलाई दोष लगाएका छन्‌।
धेरै दिनसम्‍म घाम, तारा केही देख्‍न पाइएन। तूफान लगातार चलिरहेकोले अन्‍त्‍यमा बाँच्‍ने आशासमेत हामीले त्‍यागिदियौं।
यसैकारणले मैले तपाईंहरूसँग भेटेर बातचीत गर्न तपाईंहरूलाई बोलाएको हुँ। किनभने इस्राएलको आशा जो हो त्‍यसको निम्‍ति यस साङ्‌लामा म बाँधिएको छु।”
“तेरा सन्‍तान पनि यस्‍तै असंख्‍य हुनेछन्‌” भनेर परमेश्‍वरले भन्‍नुभएअनुसार, आशा पटक्‍कै नहुँदा पनि अब्राहामले आशा राखी विश्‍वास गरे, र यसरी उनी धेरै जातिहरूका पिता बने।
उहाँद्वारा हामीले यस अनुग्रहमा विश्‍वासद्वारा प्रवेश पाएका छौं। यस अनुग्रहमा हामी खड़ा छौं, र परमेश्‍वरका महिमाको सहभागी हुने हाम्रो आशामा हामी रमाउँछौं।
सहनशीलताले चरित्र, र चरित्रले आशा उत्‍पन्‍न गराउँछ।
आशाले हामीलाई निराशा गराउँदैन, किनकि हामीलाई दिइएका पवित्र आत्‍माद्वारा परमेश्‍वरको प्रेम हाम्रा हृदयमा खन्‍याइएको छ।
सृष्‍टि व्‍यर्थताको वशमा पारियो, त्‍यसको आफ्‍नै इच्‍छाले होइन, तर उहाँको इच्‍छाले, जसले त्‍यसलाई वशमा पार्नुभयो, यसै आशामा,
किनकि यही आशामा हामीले मुक्ति पाएका थियौं। अब देखिनेचाहिँ आशा त आशा नै होइन। किनकि देखेका कुराको आशा कसले गर्छ र?
तर यदि हामी आफूले नदेखेका कुराको आशा गर्छौं भने, धैर्यसाथ हामी त्‍यसको प्रतीक्षा गर्छौं।
यस आशामा कि मेरो आफ्‍नै यहूदी जातिलाई डाही बनाउन सकूँ, र तीमध्‍ये कसै-कसैलाई बचाउन सकूँ।
आफ्‍नो आशामा आनन्‍द गर, सङ्कष्‍टमा धैर्य धारण गर, प्रार्थनामा निरन्‍तर लागिरहो।
अघिअघि लेखिएका कुराहरू हाम्रो शिक्षाको निम्‍ति लेखिएका थिए, यस उद्देश्‍यले कि पवित्र-शास्‍त्रबाट आउने स्‍थिरता र उत्‍साहद्वारा हामी आशा प्राप्‍त गर्न सकौं।
र फेरि यशैया भन्‍दछन्, “यिशैको वंशबाट एक जना आउनुहुनेछ, उहाँले अन्‍यजातिहरूमाथि शासन गर्नुहुनेछ, उहाँमाथि अन्‍यजातिहरूले आशा राख्‍नेछन्‌।”
म स्‍पेन जाँदा तिमीहरूलाई भेट्‌ने आशा राख्‍दछु, र तिमीहरूसँग केही समयसम्‍म सङ्गतिको आनन्‍द लिएपछि तिमीहरूले मलाई मेरो बाँकी यात्रामा मदत दिनेछौ भन्‍ने आशा राख्‍तछु।
२ कोरिन्थी १:७
तिमीहरूका निम्‍ति हाम्रो आशा दृढ़ छ। किनकि हामी जान्‍दछौं, कि जसरी तिमीहरू हाम्रा दुःखमा सहभागी छौ, त्‍यसरी नै हाम्रो सान्‍त्‍वनामा पनि तिमीहरू सहभागी हुनेछौ।
२ कोरिन्थी १:१३
किनकि तिमीहरूले पढ्‌न र बुझ्‍न नसक्‍ने केही कुरा हामी तिमीहरूलाई लेख्‍दैनौं, र म आशा गर्दछु, कि तिमीहरूले पूर्ण रूपले बुझ्‍नेछौ,
२ कोरिन्थी ३:१२
यसकारण हाम्रो यस्‍तो आशा भएकोले हामी अत्‍यन्‍तै साहसी भएका छौं।
२ कोरिन्थी ५:११
यसकारण प्रभुको भय थाहा गरेर हामी मानिसहरूलाई मनाउँछौं। तर हामी जे छौं परमेश्‍वरले जान्‍नुहुन्‍छ, र म आशा गर्दछु, त्‍यो तिमीहरूका विवेकमा पनि प्रष्‍टै होला।
२ कोरिन्थी १०:१५
हामी सीमा नाघेर अरूहरूको परिश्रममा गर्व गर्दैनौं, तर हाम्रो आशा यो छ, कि तिमीहरूको विश्‍वास बढ्‌दैजाँदा तिमीहरूका बीचमा हाम्रो क्षेत्र झन्‌ बढ्‌दैजानेछ,
२ कोरिन्थी १३:६
म आशा गर्दछु, कि हामी असफल भएका छैनौं भन्‍ने तिमीहरू थाहा पाउनेछौ।
किनकि हामी पवित्र आत्‍माद्वारा विश्‍वासबाट धार्मिकताका आशाको प्रतीक्षा गर्छौं।
हामी ख्रीष्‍टमा पहिलेदेखि आशा राख्‍नेहरूलाई उहाँले आफ्‍नो महिमाको प्रशंसाको निम्‍ति जिउन सकौं भनेर उहाँमा नै नियुक्त गर्नुभएको छ र छान्‍नुभएको छ।
म यो पनि प्रार्थना गर्दछु, कि तिमीहरूको हृदयका आँखा उज्‍यालो होस्, र कुन आशाको निम्‍ति उहाँले तिमीहरूलाई बोलाउनुभएको छ, र सन्‍तहरूमा उहाँको महिमित उत्तराधिकारको सम्‍पत्ति के हो, सो तिमीहरूले जान्‍न सक।
याद राख, तिमीहरू त्‍यस बेला ख्रीष्‍टबाट अलग, इस्राएलका नागरिक हकबाट बाहिर भएका थियौ, र प्रतिज्ञाका करारहरूबाट बिराना, आशा नभएका र यस संसारमा परमेश्‍वररहित थियौ।
शरीर एउटै छ, र पवित्र आत्‍मा एउटै हुनुहुन्‍छ— जसरी तिमीहरू बोलाइँदा एउटै आशामा बोलाइएका थियौ, जुन आशा तिमीहरूको बोलावटसँग गाभिएको छ—
मेरो उत्‍कट प्रतीक्षा र आशा यो हो, कि म कदाचित्‌ लज्‍जित हुनेछैनँ, तर ममा प्रशस्‍त साहस हुनेछ, र सधैँझैँ अहिले पनि मेरो शरीरमा ख्रीष्‍ट सम्‍मानित हुनुहुनेछ, चाहे मृत्‍युद्वारा होस्, अथवा जीवनद्वारा।
म तिमीहरूकहाँ तिमोथीलाई चाँड़ै पठाउन प्रभुमा आशा गर्दछु, ताकि तिमीहरूको समाचार पाएर म पनि प्रसन्‍न हुन सकूँ।
यसकारण मेरो निम्‍ति के-कसो हुन्‍छ सो बुझ्‍ने बित्तिकै तिनलाई पठाउने आशा गर्दछु।
मैले भेटी खोजेको होइन, तर म त तिमीहरूमा यस्‍तो फलको आशा राख्‍छु, जो तिमीहरूकै हिसाबमा जम्‍मा हुँदैजाओस्‌।
जुनचाहिँ तिमीहरूका निम्‍ति स्‍वर्गमा राखिएका आशाको कारणले नै हो। यस विषयमा तिमीहरूले अघि नै सत्‍यको वचन, अर्थात्‌ सुसमाचारमा सुनेका छौ।
यदि तिमीहरू आफ्‍ना विश्‍वासमा अचल र स्‍थिर भइरह्यौ र तिमीहरूले सुनेका सुसमाचारको आशाबाट हटेनौ भने। यही नै त्‍यो सुसमाचार हो, जो स्‍वर्गमुनि हरेक प्राणीलाई प्रचार गरिएको छ, जसको म पावल, धर्म-सेवक भएँ।
यस रहस्‍यको महिमामय सम्‍पत्ति अन्‍यजातिहरूमा कति महान्‌ छ, त्‍यो कुरा आफ्‍ना सन्‍तहरूलाई प्रकट गर्न परमेश्‍वरले चुन्‍नुभयो। यो रहस्‍य ख्रीष्‍ट तिमीहरूमा हुनु हो, जो महिमाको आशा हो।
१ थिस्सलोनिकी १:३
हाम्रा परमेश्‍वर पिताको सामुन्‍ने हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्‍टमा तिमीहरूका विश्‍वासको काम, प्रेमको परिश्रम र आशाको धैर्य निरन्‍तर सम्‍झन्‍छौं।
१ थिस्सलोनिकी २:१९
हाम्रा प्रभु येशू जब आउनुहुन्‍छ, त्‍यस बेला उहाँको सामुन्‍ने हाम्रो आशा वा आनन्‍द वा गर्वको मुकुट तिमीहरू नै होइनौ र?
१ थिस्सलोनिकी ४:१३
तर भाइ हो, सुतिगएकाहरूका विषयमा तिमीहरू अजान बस भन्‍ने हामी इच्‍छा गर्दैनौं, र तिमीहरूले आशा नहुने मानिसहरूजस्‍ता शोक गर्नु नपरोस्‌।
१ थिस्सलोनिकी ५:८
तर हामीचाहिँ दिनका हुनाले हामी सचेत होऔं, र विश्‍वास र प्रेमका छातीको पाता र मुक्तिका आशाको टोप लगाऔं।
२ थिस्सलोनिकी २:१६
अब हामीलाई प्रेम गर्नुहुने र अनुग्रहद्वारा अनन्‍तको सान्‍त्‍वना र उत्तम आशा दिनुहुने हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्‍ट आफैले तथा परमेश्‍वर हाम्रा पिताले,
१ तिमोथी १:१
हाम्रा मुक्तिदाता परमेश्‍वर र हाम्रो आशा ख्रीष्‍ट येशूको आज्ञाअनुसार ख्रीष्‍ट येशूको प्रेरित पावलबाट,
१ तिमोथी ३:१४
तिमीकहाँ चाँड़ै आउने आशा राखेको छु, तर म यो तिमीलाई लेख्‍तछु,
किनकि यस उद्देश्‍यले हामी परिश्रम र प्रयत्‍न गर्दछौं, किनकि हाम्रो आशा जीवित परमेश्‍वरमा राखिएको छ, जो सबै मानिसका, विशेष गरी उहाँमाथि विश्‍वास गर्नेहरूका मुक्तिदाता हुनुहुन्‍छ।
१ तिमोथी ५:५
तर जो साँच्‍चै नै विधवा हुन्, र तिनको कोही छैन भने, तिनले परमेश्‍वरको आशा राख्‍तछिन्, र रातदिन नम्र-निवेदन र प्रार्थनामा लागिरहन्‍छिन्‌।
१ तिमोथी ६:१७
यस संसारका धनीहरूलाई घमण्‍डी नहुने आज्ञा देऊ, र अनिश्‍चित सम्‍पत्तिमा होइन तर हामीलाई हरेक थोक प्रशस्‍तसँग उपभोग गर्न दिनुहुने परमेश्‍वरमाथि तिनीहरूले आशा राखून्‌।
जुन विश्‍वास र ज्ञान अनन्‍त जीवनको आशामा स्‍थिर छन्, अनि कहिल्‍यै झूट नबोल्‍नुहुने परमेश्‍वरले अनन्‍त कालदेखि प्रतिज्ञा गर्नुभयो।
र हाम्रो धन्‍यको आशा— हाम्रा महान्‌ परमेश्‍वर र मुक्तिदाता येशू ख्रीष्‍टका महिमाको आगमनको हामी प्रतीक्षा गर्दछौं।
ताकि उहाँको अनुग्रहले धर्मी ठहरिएर हामी अनन्‍त जीवनको आशा राख्‍ने उत्तराधिकारी बन्‍न सकौं।
साथै मेरो निम्‍ति एउटा पाहुना-कोठा ठीक पारी राखिदेऊ, किनकि तिम्रो प्रार्थनाद्वारा म पनि तिमीकहाँ आउन पाउँछु कि भन्‍ने आशा गर्दछु।
तर ख्रीष्‍टचाहिँ परमेश्‍वरका घरानामा पुत्रको रूपमा विश्‍वस्‍त हुनुहुन्‍थ्‍यो। यदि हाम्रो आशामा हामीले आफ्‍नो भरोसा र गौरव अन्‍त्‍यसम्‍मै थामिराख्‍यौं भने हामी उहाँका परिवार हौं।
हामी चाहन्‍छौं, कि तिमीहरू प्रत्‍येकले आफ्‍ना सम्‍पूर्ण आशा प्राप्‍त गर्नका निम्‍ति अन्‍त्‍यसम्‍मै त्‍यही तत्‍परता देखाउनेछौ,
बदली हुन नसक्‍ने यी दुई कुराहरूमा परमेश्‍वर असत्‍य ठहरिनु असम्‍भव छ। यसैकारण हामी शरण लिनेहरूले हाम्रा सामु राखिदिएको आशा प्राप्‍त गर्ने ठूलो हौसला पाएका छौं।
हाम्रा आत्‍माको निम्‍ति दृढ़ र सुरक्षित लङ्गरको रूपमा यो आशा हामीसित छ। यो आशा पर्दाभित्रको पवित्रस्‍थानमा प्रवेश गर्दछ,
(किनकि व्‍यवस्‍थाले केही कुरा सिद्ध तुल्‍याएन) र त्‍यसभन्‍दा अझ उत्तम आशा दिइएको छ, जसद्वारा हामी परमेश्‍वरको नजिक पुग्‍छौं।
हामीले दृढ़ स्‍वीकार गरेको आशालाई दोधार नभईकन दह्रिलोसँग थामिराखौं, किनकि जसले प्रतिज्ञा गर्नुभयो, उहाँ विश्‍वासयोग्‍य हुनुहुन्‍छ।
अब विश्‍वासचाहिँ आशा राखिएका कुराको निश्‍चय र नदेखिएका कुराको ढृढ़ भरोसा हो।
यसकारण भाइ हो, प्रभुको आगमन नहोउञ्‍जेल धैर्य धारण गर। हेर, भूमिको बहुमूल्‍य फसलको आशा राखेर किसानले अगिल्‍लो र पछिल्‍लो वर्षा नहोउञ्‍जेल धैर्य धारण गरेर पर्खिरहन्‍छ।
१ पत्रुस १:३
परमेश्‍वर र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्‍टका पिता धन्‍यका हुनुहुन्‍छ! उहाँको महान्‌ कृपाले मृतकबाट येशू ख्रीष्‍टको पुनरुत्‍थानद्वारा एउटा जीवित आशाको निम्‍ति हामी नयाँ गरी जन्‍मेका छौं।
यसकारण आफ्‍नो मन बाँध, संयमी होओ र येशू ख्रीष्‍ट प्रकट हुनुहुँदा तिमीहरूकहाँ आउन लागेको अनुग्रहमा तिमीहरूको आशा पूर्ण रूपले राख।
१ पत्रुस १:२१
उहाँद्वारा परमेश्‍वरमाथि तिमीहरूको भरोसा छ, जसले ख्रीष्‍टलाई मृतकबाट जीवित पारेर महिमा दिनुभयो, ताकि तिमीहरूको विश्‍वास र आशा परमेश्‍वरमा रहोस्‌।
१ पत्रुस ३:५
किनकि यही किसिमले अघिअघि परमेश्‍वरमा आशा राख्‍ने पवित्र स्‍त्रीहरूले पनि सिङ्गार गर्थे, र आफ्‍ना पतिका अधीनमा बस्‍थे।
१ पत्रुस ३:१५
तर ख्रीष्‍टलाई प्रभु मानेर तिम्रो हृदयमा उहाँको श्रद्धा गर। तिमीहरूमा भएका आशाको विषयमा कसैले सोधपूछ गरे त्‍यसको जवाफ दिन सधैँ तत्‍पर बस, तर त्‍यो काम नम्रता र श्रद्धासाथ गर।
१ यूहन्ना ३:३
अनि जस्‍तो उहाँ पवित्र हुनुहुन्‍छ, उहाँमाथि यो आशा राख्‍ने हरेक मानिसले आफूलाई पवित्र पार्छ।
२ यूहन्ना १:१२
मैले तिमीहरूलाई कुरा लेख्‍नु त धेरै छ, तर कागत र मसीले ती म लेख्‍न चाहन्‍नँ। तर हामीहरूको आनन्‍द पूर्ण होस्‌ भनी म तिमीहरूकहाँ नै आउने र आमनेसामने भएर कुरा गर्ने आशा गर्छु।
३ यूहन्ना १:१४
तर तिमीलाई चाँड़ै भेट्‌ने आशा गर्दछु, र हामी आमनेसामने भेटेर कुरा गरौंला।